Beijing Holtop Environmental Protection Teknolojia Co., Ltd. dia certificated toy ny teknolojia avo-toeram-piasana. Tafiditra eo amin'ny sehatry ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny harena fanodinana, amin'ny fitsaboana sy ny fanodinana VOC ho toy ny fototry ny teknolojia.
Beijing Holtop Environmental Protection Teknolojia Co., Ltd. tsy miankina fikarohana ary mametraka ny teknolojia ny adsorption sy fampahiratana amin'ny mikorontana organika Kamban-teny, ny fisarahana sy ny famerenana ny nalaina VOC, manome feno fiarovana ny tontolo iainana isan-karazany ny vahaolana ho an'ny fako mandatsa-dranomaso sy ranon-javatra fanodinana fako fitsaboana ny indostrialy zavamaniry.
Ankoatra izany, ny sasany orinasa eo ambany Holtop Group no nekena ho orinasa teknolojia avo-sahady.
Beijing Holtop Air Conditioning Co., Ltd. dia nekena ho Zhongguancun Avo-teknolojia Enterprise
Mba ho salama kokoa rivotra fitsaboana sy ny heriny-mamonjy, Holtop dia izay misahana ny fampandrosoana ny teknolojia eo amin'ny sehatry ny angovo sy ny fiarovana ny tontolo iainana fiarovana, mamorona niavaka ho an'ny mpampiasa traikefa ary ho lasa marika nandroso izao tontolo izao.
Post fotoana: Nov-01-2018